« Pylone» fifandraisan-davitra : tsy misy ahina ny amin’ny fahasalamam-bahoaka | NewsMada
Maro ireo adihevitra manodidina ny fiantraikan’ny saha elektromanetika eo amin’ny fahasalamam-bahoaka hatramin’ny nidiran’ny teknolojia vaovao eo amin’ny fifandraisan-davitra sy ny serasera. Inona no tena marina ?
Natsangana ny komity ad-hoc ao amin’ny minisiteran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra handraisana, hamahana, ary hamaliana ireo olana sy fitarainana rehetra voaray mahakasika ny saha elektromanetika. Hatramin’ny nisiany, efa nisy ny asa nentina namahana ireo olana sy fitarainana maro voaray. Ohatra, ireo pylones eny Ivato, Tsiadana sy ny hafa. Nitondra fanazavana momba izany ny ao amin’ny minisiteran’ny Paositra, niainga avy amin’ny voka-pikarohana maro.
Mahatratra 5.000 ireo voka-pikarohana momba ny saha elektromanetika efa nahazo fankatoavana avy amin’ny OMS tato anatin’ny 30 taona mahery. Voka-pikarohana manamarina fa tsy misy atahorana amin’ny fahasalamam-bahoaka raha toa ka manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Madagasikara manana ireo fitaovana fanaraha-maso ny fotodrafitrasa momba ny fifandraisan-davitra. Noho izany, tsy misy tokony hahiana amin’ny fahasalamam-bahoaka ny saha elektromanetika.
Manamafy izany ny lalàna tamin’ny 12 oktobra 2015, « Tsy misy fitaovana radio elektrika na teknolojika mahazo miditra eto Madagasikara raha tsy nahazoana alalana avy amin’ny Autorité de Régulation des Télécommunications (Artec) ». Lalàna mifehy ny fananganana ireo fotodrafitrasa momba ny fifandraisan-davitra. Manamarina izany ny Artec raha manaraka na tsia ny fenitra napetraky ny Vondrona iraisam-pirenena momba ny fifandraisan-davitra sy ny teknolojia (UIT-T) ilay fitaovana.